Tartanka Olombikada dabaasha ee Rio oo sheeko cajiib ah ka dhacday (Sawiro) · Jowhar.com Somali News Leader
Tartanka Olombikada dabaasha ee Rio oo sheeko cajiib ah ka dhacday (Sawiro)
by mahad | Thursday, Aug 18, 2016 | 13601 views
Agosto 18 (Jowhar)— Wiil ka soo jeeda dalka Singapore ayaa u soo dhowaaday ciyaaryahanka dabaasha caanka ku ah Michael Phelps oo ku sugnaa xarun uu ku tababaranayay sanadkii 2008 waxana uu weydiistey inuu sawir la galo.
Siddeed sano kadir ayuu Joseph Schooling oo noqay 21 jir waxa uu ka guuleystey dabaasha 100m ciyaaryahankii dabaasha uu ku dayan jirey isagoo markii ugu horeysay dalkiisa yar ee Singapore billad dahab ah u soo hooyay tartankii Olombikada Rio.
Haddaba waa kuma wiilkan jebiyay rikoorka Olambikada u yiil kaasoo 50.9sec ugaga guuleystey Phelps? Schooling waxa uu ku dhashay Singapore waxana uu markiisii ugu horeysay la kulmay Phelps xilli uu booqasho ku joogay dalka Singapore sanadkii 2008.
Wiilka ka soo jeeda dalka Singapore ayaa waxaa soo jiitay guusha uu gaaray Phelps, waxana uu bilaabay inuu ku daydo oo tababar dhinaca dabaasha ah qaato. Schooling waxa uu bilaabay tababar adag isagoo 13 jir ah waxana uu u wareegay dalka Maraykanka waxana uu waxbarasho ka bilaabay Bolles School oo ku yaal Jacksonville,Florida kadibna waxaa uu waxbarasho jaamacadeed ka bilaabay jaamacada Texas.
Xiddigan dabaasha hooyadii May iyo aabihii Colin ayaa waanwaan ka galay in dib loogu dhigo wiilkooda shaqada qaranka ee uu gudan lahaa sanadkii 2013 sida laga soo xigtey Yahoo! Sports.
Sanadkii 2013 ayay May waxa ay saadaalisay in wiilkeeda uu guul ka gaarayo tartanka Rio, laakiin marnaba ma fileyn inuu gaarayo natiijo sidaa u weyn. ‘Sanadka 2016,waxa uu ugu dambeyntii iman doonaa tartanka finalka,’ayay tiri Schooling hooyadii May 2013.
Shacabka Singapore waxa ay farxad la istaageen kadib markii wiilkooda uu ka guuleystey halyeygii dabaasha caalamka ee Phelps kaasoo ugu dambeyntii helay bilada maarta la wadaagay labo dabaalyahan oo ka kala socday dalalka Koofur Afrika iyo Hungary.
“Weli igama dhaadhicin, mana garanayo wax aan rumeysto in ay dhab tahay iyo in kale,waxayna ila tahay in aan tartankii isku diyaarinayo.”ayuu yiri Schooling.
Isagoo ka hadlayay sawirkii ay wada galeen isaga iyo Phelps 2008 ayuu yiri:”Waa arrin lagu tilmaami karo waali wixii dhacay siddeed sano gudahood.” “Waxay yimaadeen naadigii aan ku tababaran jirey.”ayuu u sheegay The Guardian.
‘Qof walba wuu soo cararay waxayna ku hadaaqayeen “Waa Michael Phelps! Waa Michael Phelps’ waxan runtii doonayay in aan sawir la galo aad ayaana ugu farxay oo aan afkeyga kala furi waayay.’ Schooling ayaa rumeysan in haddii uusan ahayn Phelps inuusan gaari lahayn heerka uu hadda gaaray.
‘Wuxuu sabab u yahay inaan gaaro wixii aan doonayay in aan noqdo oo ah dabaalyahan wanaagsan. Wiilkan ayaa weli waxa uu ahaa mid aan rumeysan karin guusha uu gaaray,waxana uu heerkii ugu adkaa gaaray markii uu Phelps oo ahaa qofkii uu ku dayan jirey uu ugu hambalyeeyay guusha uu gaaray.
Danjirihii dalka Burundi General Nkurunziza oo loo sameeyay xaflad sagootin ah (Sawiro)
Bandhiga Carwada Buugaagta Muqdisho oo maalintii labaad galay (Sawirro)